काठमाडौंमा बालेन जित्दाको असर के हुन सक्छ? – PathivaraOnline
Home > विचार > काठमाडौंमा बालेन जित्दाको असर के हुन सक्छ?
admin May 19, 2022 विचार 0
अहिले सम्मको मत परिणामको गति हेर्दा काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र उर्फ बालेन साहको जित निश्चित जस्तो देखिन्छ । उनी जित्दाको असर जित पछिका दिनहरूमा त आउने नै छ ।
तैपनि उनको जितको बढ्दो सम्भावनाले सिण्डिकेट मानसिकता बोकेकाहरूमा अहिले नै देखिएको छटपटी, निदान हुन नसक्ने पीडा र काबु बाहिरको स्थितिको बोधको त्रासदी लोकतन्त्रको निमित्त गम्भीर ध्यानाकर्षणको विषय भएको छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा निर्विकल्प आधारस्तम्भ, जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको सुन्दरतम पक्ष निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्न नसक्नेहरू वास्तवमा कति लोकतन्त्रवादी छन् भन्ने तथ्य पनि छर्लङ्ग भएको छ ।
राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका मसिहा भनिने महान अभियन्ताहरूले गहिराईको मापन पनि बालेन जित उन्मुख प्रकरणले स्पष्ट देखिन थालेको छ । बालेन स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् । कुनै पार्टीसँग उनको सम्बन्ध छैन । यसको अर्थ यो कदापि होइन कि उनको राजनीतिक धारणा वा विचार नै छैन होला । अथवा उनको विचार वा सोच समुचित विकास क्रममा आकार लिने स्थितिमा बढिरहेको छैन होला ।
विचार व्यक्तिको हुन्छ र त्यो तिनका अभिव्यक्तिहरूबाट प्रस्फुटित हुँदै जान्छ । अरूले कुनै ब्राण्ड ठोकिदिँदा मात्र विचार ठोकिँदैन । केही स्वनामधन्य बुद्धिजीवी वा वरिष्ठ अग्रजहरूले निजलाई राजावादी वा धर्म प्रचारक भनि दिएर मात्र उनी जनताको संघर्षको उपलब्धि गणतन्त्रको विरुद्ध खडा भएर राजावादी हुनेछन् भन्ने कुरा पनि होइन ।
पहिचान र विविधताको सम्मान तथा क्षेत्रीय स्वशासनको एजेन्डालाई सयौं शहादतपूर्ण आन्दोलनबाट अगाडि सारेर तराई–मधेसले क्षेत्रीय असमानता, नागरिक अधिकारको क्षेत्रमा जारी व्यवहारिक विभेद तथा सन्तुलित विकासको बाटोमा देखा परेका समस्याहरूको एकमुष्ट निदानको बाटो आफ्ना एजेन्डामार्फत् प्रस्तुत गरेकै छ ।
मधेसी, थारू, मुस्लिम, दलित, आदिवासी–जनजाति जस्ता शोषित र पीडित समुदायहरूमा आत्मविश्वास र संघर्षको उर्जा प्रदान गरेकै छ । हो, नेपालको मूलधारीय राजनीतिबाटै तालिम पाएका तराई–मधेसका नेताहरू मधेसको महान एजेन्डा बोक्न सकेनन् । स्वार्थ, पैसा र ईशाराले परिचालित भए । त्यसकारण संघर्षको संझिन सक्ने पात्रहरू बन्न सकेनन् । तर, त्यसले आम जनताको संघर्ष ब्यर्थमा गयो भन्नु अनउपयुक्त होला ।
स्थानीय तह जनताको प्रत्यक्ष दैनिक सरोकारको सरकार भएकोले स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा हुनु अर्थहीन छ । यसबारे जिम्मेदार निकायहरू सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ भन्ने कुराको बिगुल फुकाईको निमित्त बालेनको उम्मेदवारी हो । अर्कोतर्फ स्थानीय तहको उम्मेदवार हुन विचारलाई हुत्याउँदै आयाराम गयाराम हुनेहरू र जनतालाई तरकारी बजारको सागपात ठान्ने, अवाञ्छित तरिकाबाट धनोपार्जन गरी उपप्लावित राशीले मानसम्मान किन्न खोजी गर्ने, कालो धनलाई सेतो बनाउनेहरूलाई निश्चय नै यो चोटिलो प्रहार पनि हो ।
यसका साथै यस उम्मेदवारीले राजधानीमा उत्पन्न वर्तमान लहरले काठमाडौंमा बसेर देशको सत्ता, सञ्चार, श्रोत र धेरै हदसम्म कूटनीतिक गतिविधि समेतमा पकड राख्नेहरूलाई चुनौती दिएको पनि हो । बालेन्द्र साह र उनका पछाडि पृष्ठभूमिमा रहेका युवाहरू यसका लागि निश्चय नै साधुवादका पात्र हुन् ।
हेटौंडामा पनि पछि पर्‍यो हलो, कलम अघि, एमाले पछि पछि…